Inona avy ireo karazana fifindra-monina misy? Fantatrao daholo ve? | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | soso-kevitra, General
Ny tsy mitovy karazana fifindra-monina araho ny fiandohan'ny fiandohan'ny zanak'olombelona amin'ny faniriana tsy azo atao mandroso. Io faniriana io no nahatonga antsika ho karazana nahavita nanjanaka ny vazan-tany rehetra, hany ka misy olona mipetraka na dia any amin'ny faritra akaikin'ny andry sy ireo any an'efitra aza.
Araka izany, hatramin'ny niandohan'ny fisianay dia nanolo ny tranonay ho faritany iray izahay; izany hoe nifindra monina izahay. Amin'izao fotoana izao dia zavatra ataontsika izany raha mandeha mitsangatsangana amin'ny firenena iray isika ary, satria tena tianay izany dia manapa-kevitra ny hijanona sy honina isika. Fa, Fantatrao ve hoe inona ny karazana fifindra-monina misy?
Ny fifindra-monina ataon'ny olombelona dia azo sokajiana ho karazany telo: arakaraka ny fotoana, arakaraka ny toetrany ary arak'izay alehany. Andao hojerentsika ny karazana fifindra-monina misaraka mba hahafantarana azy ireo bebe kokoa:
1 Karazana fifindra-monina mifanaraka amin'ny fotoana
2 Karazana fifindra-monina arakaraka ny toetrany
3 Karazana fifindra-monina arakaraka ny toerana itodiana
4 Fa maninona no mifindra monina?
5 Vokany tsara sy ratsy amin'ny karazana fifindra-monina
5.1 Vokany tsara
6 Curiosities momba ny fifindra-monina
Karazana fifindra-monina mifanaraka amin'ny fotoana
Ity karazana fifindra-monina ity dia iray izay mitranga mandritra ny fotoana voafetra, heverina ho iray karazana ara-nofo, ary koa izay tanterahina maharitra, heverina ho maharitra. Tsara ny manamarika fa ny fifindra-monina olombelona vonjimaika dia ireo izay hiverenan'ireo mpifindra monina any amin'ny toerana niaviany aorian'ny fotoana voafaritra.
Karazana fifindra-monina arakaraka ny toetrany
Miankina amin'ny zavatra manosika antsika handao ny toerana niaviantsika, ny fifindra-monina an-tery, izay araky ny anarany, dia olona iray izay voatery mandao ny taniny mba ho velona; na fifindra-monina an-tsitrapo izay rehefa mandao ny fonenany amin'ny safidiny malalaka ny mpifindra-monina.
Karazana fifindra-monina arakaraka ny toerana itodiana
Amin'ity karazana fifindra-monina ity dia manavaka ny fifindra-monina anatiny, izay rehefa any amin'ny firenena iray ihany no tanjona; na iraisam-pirenena rehefa any amin'ny firenena hafa ianao.
Fa maninona no mifindra monina?
olona mitady toerana honenana tsara foana izy ireo, na inona na inona fiaviany sy ny toe-karena misy azy ireo. Tao anatin'izay taona lasa izay dia lasa lohahevitra iray resahina isan'andro ny fifindra-monina: olona avy amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana miampita ny dobo mitady sakafo, asa ary filaminana. Maro amin'izy ireo no mety hamoy ny ainy, satria fantatry ny rehetra fa tsy tonga amin'ny alàlan'ny fitaovam-pitaterana mety indrindra izy ireo. Nefa betsaka ny zavatra azony atao; rehefa dinihina tokoa, ny toerana rehetra dia tsara kokoa noho ny faritra rotiky ny ady.
Etsy ankilany, ary araka ny efa noresahintsika teo aloha, raha misy amintsika mandeha mitsangatsangana, dia lazao ohatra, New York ary hita fa tian'izy ireo ny toetr'andro, ny olona, ​​ny toerana, ary manana ny mety ihany koa izy ireo ny mahita asa, Azo inoana fa hieritreritra ny hipetraka vetivety ianao na, iza no mahalala, angamba maharitra. Ho lasa mpifindra monina any New York sy mpifindra monina ao amin'ny firenentsika isika, saingy azo antoka fa afaka manamboatra ny fiainantsika any tsy misy olana isika.
Antony iray hafa mahatonga antsika tsy maintsy mifindra monina dia ny loza voajanahary, na horohoron-tany, tondra-drano, haintany sns. Raha mipetraka amin'ny faritra mahazatra ny voina ianao, dia azonao atao ny miandry ny fananganana tranobe mahazaka azy, saingy mety hampidi-doza izany, ka matetika ianao no misafidy mitady trano azo antoka kokoa amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao firenena na hafa.
Vokany tsara sy ratsy amin'ny karazana fifindra-monina
Toy ny famindran-toerana rehetra, dia mety hisy vokany eo amin'ny toerana niaviany sy ny toerana itodiana.
Anisan'ny vokany tsara rehetra, marihana fa amin'ny firenena niaviany dia mihena ny tsindry demografika amin'ny loharanon-karena ary mihena ny tsy fananan'asa, ankoatry ny fiheverana ny fanamaivanana ny be loatra; raha ny any amin'ny tany itodiana dia misy a fanavaozana ny mponina, misy fahasamihafana bebe kokoa amin'ny kolontsaina ary ny mitombo ny vokatra.
Ho an'ny firenena niaviany, ny lehibe indrindra dia ambonin'ny zava-drehetra mihantitra ny isan'ny mponina ary mihena ny fidiram-bolan'ny vahoaka. Ny tanora manana taona miasa no voalohany manapa-kevitra ny hiala, ary izany dia miteraka olana amin'ny toerana niaviany.
Etsy ankilany, hiatrika ny firenena itodiana a fihenan'ny karama amin'ny sehatra sasany amin'ny fitrandrahana mpiasa ny mpifindra monina, izay manaiky hanao asa mafy amin'ny karama ambany.
Curiosities momba ny fifindra-monina
Ankoatry ny efa naseho hatreto dia mahaliana ny mahafantatra fa misy koa ny mizana mifindra na fifandanjana mpifindra monina, izay mahasamihafa ny fifindra-monina (olona miala) sy ny fifindra-monina (ireo tonga mijanona). Rehefa lehibe kokoa ny fifindra-monina noho ny fifindra-monina, ny fifandanjan'ny mpifindra monina dia heverina ho tsara, ary ny lafiny ratsy kosa raha tsy izany.
Ilay sosialista Robert Owen (1771-1858), avy any Welsh, dia nanomana tanàna antsoina hoe New Harmony, izay tsy maintsy hatsangana ao Indiana (Etazonia). Ny tanjona dia ny hanomezana trano sy asa ho an'ireo mpifindra monina, na dia tsy tanteraka aza izany tamin'ny farany. Na eo aza ny zava-drehetra dia niteraka tetikasa marobe izay nahita ny mason'andro, indrindra noho ny fanohanan'ireo mpifindra monina. Anisan'ireo nasongadinay ny tanàna zanabolana (toy ny any Maipú any Chile, Quezón any Filipina na ny New City of Belen any Peru), ny drafitra ny tanàna amerikanina latina, na ilay ny fametrahana ny faritry ny sisintany miaraka amin'i Haiti avy amin'ny Repoblika Dominikanina.
Manantena izahay fa voavaha ny fisalasalanao momba ny fifindra-monina misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Karazana fifindra-monina
Torohevitra sy torohevitra momba ny fahasalamana ho an'ny toerana telo samihafa